Kpọọ na Action: Gịnị bụ CTA? Olee Otú You Ga-esi Meziwanye Uru Ha Na-arụ?
Kpọọ Iji Mee Ihe: Gịnị bụ CTA? Dịkwuo gị CTR!
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 7, 2016 Fraịde, Ọgọstụ 12, 2016 Douglas Karr
O yiri ka ọ bụ ihe doro anya mgbe ị jụrụ ajụjụ ahụ, Ihe bu oku ime ihe ma ọ bụ CTA, mana ọ na-abụkarị ohere funahụrụ ma ọ bụ ohere emejọ iji mee ka ndị na - agụ akwụkwọ, ndị na - ege ntị, na ndị na - eso ụzọ nwee mmekọrịta miri emi na akara gị.
Gịnị Bụ Oku Iji Mee Ihe?
Callkpọ oku ka emee ihe dịka mpaghara ihuenyo nke na-eme ka onye na-agụ ya pịa-iji tinye akara na akara. Mgbe ụfọdụ ọ bụ onyonyo, oge ụfọdụ ọ bụ naanị bọtịnụ, oge ndị ọzọ edebere akụkụ nke akụ dijitalụ. Ọ bụghị naanị saịtị nwere ike ịnweta oku, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọdịnaya ọ bụla nwere ike (na ọtụtụ kwesịrị).
N’okwu ikpeazụ m kwuru na nnọkọ ịkparịta ụka n’ localntanet, m gwara ndị mmadụ ka ha debanye aha n’akwụkwọ anyị na-anaghị akwụ ụgwọ site n’ite ozi n’ekwe ntị marketing ka 71813 - ihe irè oku ime ihe ebe ọ bụ na isiokwu ahụ dị mkpa ma onye ọ bụla nwere ekwentị mkpanaaka ya n'oge okwu ahụ. Anyị ahụla nzaghachi ka mma na ndị a karịa ịjụ ndị mmadụ ka ha gaa na saịtị ahụ ma denye aha.
Webinars nwere ike (ma kwesiri) inwe oku na-aga ime ihe, infographics kwesịrị inwe ọfụma kpọọ ka eme (ironic nyere ihe atụ dị n'okpuru ebe a na-atụfu ohere maka onye edemede!), Na ihe ngosi kwesịrị kwa. Otu onye mụ na ya na-arụ ọrụ na-enyekarị ego n'efu maka ịzụ ahịa azụmaahịa na njedebe nke nkwupụta ya - na-arụ ọrụ dị egwu. Uskwanye mmadụ ibudata, ịdenye aha, oku ekwentị, ma ọ bụ ọbụna isiokwu ọzọ dị mkpa nwere ike ịbụ nnukwu CTA.
Ihe Niile O Kwesịrị Inwe Oku?
Gaghị ahụ ọtụtụ mpempe akwụkwọ anyị rụpụtara na-enweghị oku ịme ihe, mana anyị na-ekerịta ọtụtụ ọdịnaya na-enweghị ya. Ọ bụghị ihe niile ị na-eme kwesịrị ịnwa ire, ụfọdụ n'ime ya kwesịrị ịnwa iwulite ntụkwasị obi na ikike yana ndị ndu na ndị ahịa. Na-ere mgbe niile nwere ike ịbụ mantra n'ọtụtụ ahịa na usoro ịzụ ahịa, mana ire ere nwekwara ike ịbụ ntụgharị na mkparịta ụka ụfọdụ. Ọchịchị m nke isi aka bụ mgbe nile nwere Oku Iji Mee Ihe mgbe ihe mgbaru ọsọ gị bụ ịkwali onye ahụ ịbanye na njikọ miri emi.
Etu esi mepụta oku dị irè iji mee ihe
Enwere usoro egosipụtara maka itinye oku dị irè na usoro ọrụ. Lee ụfọdụ n'ime ha:
Mee ka oku gi rụọ ọrụ nke ọma - Ntinye maka CTA kwesịrị ịdị n'akụkụ ma ọ bụ n'ahịrị na uche onye na-agụ ya. Anyị na-etinyekarị CTA n'aka nri nke ọdịnaya anyị na-ede ka ndị na-ekiri ya nwee ike ijide ya. Anyị nwere ike ịme ka ha danyekwuo n'ime iyi ahụ iji bulie ya n'ọdịniihu. Sitesfọdụ saịtị na-ese CTA ka ndị na-agụ ya na-agagharị, CTA na-anọnyere ha.
Mee ka oku gị rụọ ọrụ dị mfe - Ma ọ bụ onyonyo ma ọ bụ onyinye na okwu gị, ijide n’aka na ntuziaka ndị ahụ dị mfe, yana ụzọ itinye aka na-adị mfe ga-eme ka ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị na-ege gị ntị ga-akpọ, ma ọ bụ pịa-na omume ị gwara ha ka ha mee. Ihe oyiyi CTA na-enwekarị
Debe ihe ahụ na CTA gị. Jiri usoro okwu dika oku, nbudata, pịa, ndebanye aha, mmalite, wdg. Ọ bụrụ na ọ bụ CTA dabeere na ihe oyiyi, ị ga-ahụkarị ndị a na bọtịnụ dị iche. Ndị ọrụ webị gụrụ akwụkwọ pịa bọtịnụ, yabụ onyonyo ahụ na-edebanye aha na-akpaghị aka dị ka ọrụ ha ga-ewere.
Gbakwunye Uche nke Mberede - Oge agwụla? Ihe onyinye ahụ ọ gwụrụ? Enwere oche ole na ole? Ihe ọ bụla iji nyere aka mee ka onye na - agụ ya mee ihe ugbu a kama nke ga - eme ka ọnụego ntụgharị gị bawanye. Gbakwunye echiche nke ịdị ngwa bụ akụkụ dị oke mkpa nke CTA ọ bụla.
Push Uru karịrị atụmatụ - Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etu ọnụ maka ihe ha na-eme kama uru ha na-enweta maka ndị ahịa ha. Ọ bụghị ihe ị na-eme na-ere; ọ bụ uru na-arafu onye ahịa ịzụrụ. Na-enye ohere iji mee ka ihe dị mfe? Iji nweta nsonaazụ ozugbo? Inweta ndụmọdụ efu?
Mee atụmatụ tozọ Ntugharị - Maka ederede blọọgụ, a na-agụkarị ụzọ ahụ, lee CTA, debanye aha na peeji ọdịda, ma gbanwee. Pathzọ ị gbanwere nwere ike ịdị iche mana ịlele anya na ịhazi ụzọ nke ịchọrọ ka ndị mmadụ jiri ọdịnaya gị ga-enyere gị aka ịmepụta nke ọma ma gbanwee usoro iji usoro oku gị.
Nwalee CTA gị - Chepụta ọtụtụ nsụgharị nke CTA gị iji chọpụta nke na-eme ka nsonaazụ azụmaahịa ka mma. Otu naanị ezughị - ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị ewepụta oge iji nye atụmatụ ọzọ, verbiage, agba, na nha. Mgbe ụfọdụ ahịrịokwu dị mfe zuru oke, oge ndị ọzọ ọ nwere ike ịbụ gif animated.
Nwaleenụ gị Nye - Ikpe ikpe n'efu, mbupu n'efu, nkwa afọ ojuju 100%, ego… ị kwesịrị ịnwale nhọrọ nke onyinye dị iche iche iji kpoo mmụba na ntụgharị. Jide n'aka na ị ga-atụle arụmọrụ zuru oke nke onyinye ndị ahụ gbasara njigide ndị ahịa, kwa! Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye mbelata ego dị elu naanị ka ha tufuo onye ahịa ha na njedebe nke nkwekọrịta ha.
Lelee akwụkwọ ozi ọzọ anyị kesara maka ihe ndị ọzọ Mee na Emela nke Oku na-aga nke Ọma.
Tags: animation gifkpọọ ka emekpọọ agba agbakpọọ gaa rụọ ọrụkpọọ gaa n'omumekpọọ nha imekpọọ edinam verbiagekpọọ okwu okwuctaBọtịnụ CTAebe ctaọdịdị ctacta nhaokwu cta
Mee 5, 2015 na 9: 08 AM
Daalụ maka ịkekọrịta ndụmọdụ maka mkpọsa CTA dị irè. N'ezie nhọrọ nke okirikiri nhọrọ ukwuu na ibe agba nwere ọtụtụ ihe maka nsonaazụ kacha mma. Emeela m ọtụtụ mkpọsa ma ọ na-arụ ọrụ.
Jul 19, 2017 na 1:52 PM
Usoro ahia ahia ebook ebook nkwado email nwere ezigbo oku ime ihe. Kama nke “Achọrọ m nke a” ma ọ bụ “budata ugbu a!”. O jidere ndị na-ege ntị na egwu ya “Ogologo oge!”Bọtịnụ CTA ederede.
Ọ masịrị m ebe ọ bụ na ọ dị mkpa maka ọdịnaya nke ebook (Jiri mmeghari ọnụ ahịa ọnụ na mba mba na US ADRs ịkọ ọnụahịa ngwaahịa n'ụzọ ziri ezi tupu ahịa emepe.) Na ndị na-ege ya ntị, nke bụ isi ndị ahịa ahịa ngwaahịa na ndị na-anụ ọkụ n'obi. Chọta ya Ebe a.